विदुर कौरव र पांडवका काका र धृतराष्ट्र एवं पाण्डुका भाइ थिए। तिनको जन्म रानी अम्बिकाकी एक दासी परिश्रमी का गर्भदेखि भएको थियो। विदुरलाई धर्मराजको अवतार पनि मानिन्छ। उनको पत्नीको नाम शुलभा थियो । उनी हस्तिनापुरका महामन्त्री थिए।
हस्तिनापुर नरेश शन्तनु र रानी सत्यवतीका चित्रांगद र विचित्रवीर्य नामक दुइ छोरा भए । शन्तनुको स्वर्गवास हुदाँ चित्रांगद र विचित्रवीर्य बाल्यवस्थामै थिये यस कारण तिनको पालन पोषण भीष्मले गरे। भीष्म चित्रांगद ठूला भएपछी हस्तीनारपरको राजा भए तर केही समय पछि गन्धर्वहरूसँग युद्ध हुदाँ चित्रांगद मारिए यसपछी भीष्मले तिनको भाइ विचित्रवीर्यलाई राज्य सुँम्प्दिए। अब भीष्मलाई विचित्रवीर्यका विवाहको चिन्ता भएको थीयो। उनै दिनहरू काशीराजकी तीन कन्याहरू, अम्बा, अम्बिका र अम्बालिकाको स्वयंवर हुनेवाला थियो। तिनको स्वयंवरमा गएर भीष्म एक्लैले त्यहाँ आयेका समस्त राजाहरूलाई परास्त गरिदिए र तीनहरू कन्याहरूको हरण गरी हस्तिनापुर लीएर आये। सबैभन्दा जेठी कन्या अम्बाले भीष्मलाई भन्छीन मैले त आफ्नो तन-मन राजा शाल्वलाई अर्पित गरीसकेकी छु। अम्बाको कुरा सुनीसकेपछी भीष्मले त्यसलाई राजा शाल्वका नजिकभिजवा दिए र अम्बिका र अम्बालिकाको विवाह विचित्रवीर्यका साथ गरवा दिए।
राजा शाल्वले अम्बालाई ग्रहण गरेनन् अतः त्यो हस्तिनापुर लौट गर्न आ गई र भीष्मदेखि बोली, "हे आर्य! तपाईँ मलाई प्रत्येक गर्न लाये छन् अतएव तपाईँ मसित विवाह गर्नुहोस्।" किन्तु भीष्मले आफ्नो प्रतिज्ञाका कारण त्यसको अनुरोधलाई स्वीकार गरेनन्। अम्बा रुष्ट हो गर्न परशुरामका नजिकगई र उनीसित आफ्नो व्यथा सुना गर्न सहायता माँगी। परशुरामले अम्बादेखि कहा, "हे देवि! तपाईँ चिन्ता न गर्नुहोस्, म तपाईँको विवाह भीष्मका साथ गरवानेछु।" परशुरामले भीष्मलाई बुलावा पठाईा किन्तु भीष्म तिनको नजिकछैन गये। यसमाक्रोधित भएर परशुराम भीष्मका नजिकपुगे र दुइटै वीरहरूमा भयानक युद्ध छिड गए दुइटै नैं अभूतपूर्व योद्धा थिए यस कारण हार-जीतको फैसला छैन सका। आखिर देवताहरूले हस्तक्षेपेरका यस युद्धलाई बन्द गरवा दिए। अम्बा निराश हो गर्न वनमा तपस्या गर्न चली गई।
विचित्रवीर्य आफ्नो दुइटै रानिहरूका साथ भोग विलासमा रत हो गये किन्तु दुइटै नैं रानिहरूदेखि तिनको कुनै सन्तान छैन भएको र ती क्षय रोगदेखि पीडित हो गर्न मृत्युलाई प्राप्त हो गये। अब कुल नाश हुनको भयदेखि माता सत्यवतीले एक दिन भीष्मदेखि कहा, "पुत्र! यस वंशलाई नष्ट हुनाले बचानका लागि मेरी आज्ञा छ कि तिमीइन दुइटै रानिहरूदेखि पुत्र उत्पन्न गरो।" माताको कुरा सुन गर्न भीष्मले कहा, "माता! म आफ्नो प्रतिज्ञा कुनै पनि स्थितिमा भंग छैन गर्न सकता।"
यो सुन गर्न माता सत्यवतीलाई अत्यन्त दुःख भयो। अचानक तिनलाई आफ्नो पुत्र वेदव्यासको स्मरण हो आए स्मरण गर्दै नैं वेदव्यास वहाँ उपस्थित छ गये। सत्यवती तिनलाई देख गर्न बोलीं, "हे पुत्र! तिम्रो सबै भाइ निःसन्तान नैं स्वर्गवासी हो गये। अतः मेरे वंशलाई नाश हुनाले बचानका लागि म तिमीलाई आज्ञा देती हूँ कि तिमीतिनको पत्नीहरूदेखि सन्तान उत्पन्न गरो।" वेदव्यास तिनको आज्ञा मान गर्न बोले, "माता! तपाईँ ती दुइटै रानिहरूदेखि कह दिनुहोस् कि ती एक वर्षसम्म नियम व्रतको पालन गर्दै रहहरू तब उनको गर्भ धारण हुनेछ।" एक वर्ष व्यतीत हुनमा वेदव्यास सबैभन्दा पहिला ठूलो रानी अम्बिकाका नजिकगये। अम्बिकाले तिनको तेजदेखि डर गर्न आफ्नो नेत्र बन्द गर्न लिये। वेदव्यास लौट गर्न मातादेखि बोले, "माता अम्बिकाको ठूलो तेजस्वी पुत्र हुनेछ किन्तु नेत्र बन्द गर्नका दोषका कारण त्यो अंधा हुनेछ।" सत्यवतीलाई यो सुन गर्न अत्यन्त दुःख भयो र तीले वेदव्यासलाई सानो रानी अम्बालिकाका नजिकपठाईा। अम्बालिका वेदव्यासलाई देख गर्न भयदेखि पीली पड गई। त्यसको कक्षदेखि लौटनमा वेदव्यासले सत्यवतीदेखि कहा, "माता! अम्बालिकाका गर्भदेखि पाण्डु रोगदेखि ग्रसित पुत्र हुनेछ।" यसबाट माता सत्यवतीलाई र पनि दुःख भयो र उनले ठूलो रानी अम्बालिकालोई पुनः वेदव्यासका नजिकजाने आदेश दिए। यस बार ठूलो रानिला स्वयं न जा गर्न आफ्नो दासीलाई वेदव्यासका नजिकपठाई दिए। दासीले आनन्दपूर्वक वेदव्यासदेखि भोग गराए। यस बार वेदव्यासले माता सत्यवतीका नजिकआ गर्न कहा, "माँदै! यस दासीका गर्भदेखि वेद-वेदान्तमा पारंगत अत्यन्त नीतिवान पुत्र उत्पन्न हुनेछ।" यति भनेर वेदव्यास तपस्या गर्न चले गये।
समय आउनमा अम्बाका गर्भदेखि जन्मांध धृतराष्ट्र, अम्बालिकाका गर्भदेखि पाण्डु रोगदेखि ग्रसित पाण्डु तथा दासीका गर्भदेखि धर्मात्मा विदुरको जन्म भयो।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=विदुर&oldid=1024474" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २८ जुन २०२१, ०९:४८